အချစ်တစ်ခု၏အစ – CHAR TAKE
မပုရေ စိုးကိုသံပုရာရည်တစ်ခွက်လောက်ယူခဲ့ပေးပါ” အချိန်အတော်ကြာသော်လည်းမပုကပေါ်မလာချေ၊ထို့ကြောင့် စိုးမိုးခိုင်သည်ထိုင်နေရာမှထ ကာမီးဖိုချောင်သို့ထွက်လာလေသည်၊မီးဖိုချောင်ထဲတွင်လည်းမပုကိုမတွေ့ရသောကြောင့်အလုပ် သမားတန်းလျားဖက်သို့ထွက်လာလေသည်၊မပု၏အခန်းရှေ့တွင်ယောက်ျားဖိနပ်တစ်ရံနှင့်မပု၏ ဖိနပ်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်သူမ၏စိတ်ထဲမှစဉ်းစားလိုက်မိသည်၊ “အင်း မပုမှာယောက်ျားမရှိဘူး သူ့ဧည့်သည်လားမသိဘူး” စိုးမိုးခိုင်သည်တန်းလျားနားသို့ တဖြည်းဖြည်းကပ်သွားရင်းလှေခါးနားရောက်သောအခါအိမ် ထဲမှအသံများကိုကြားလိုက်ရလေသည်၊ ငယ်ရွယ်သူပီပီစပ်စုလိုသောကြောင့်ထရံအပေါက်မှအသာ ချောင်းကြည့်လိုက်လေသည်၊အခန်းထဲတွင်မပုနှင့်ခြံစောင့်ကိုအေးတို့ကိုမြင်လိုက်ရသည်၊ကိုအေး ကအပေါ်ပိုင်းတွင်အ၀တ်မရှိဘဲ ပုဆိုးကိုကွင်းသိုင်းထားကာမပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားတွင်ဆောင့် ကြောင့်ထိုင်နေလေသည်။
ကိုအေး သည်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာမှဒူးထောက်လိုက်သောအခါမပု၏ခါးနှင့်ကျောပြင်သည်ကုတင်ပေါ် သို့ပြန်ကျသွားလေသည်၊ထို့နောက်ကိုအေးကမပု၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုပေါ်သို့တွန်းတင်လိုက် ရာမပု၏တင်ပါးများသည်အပေါ်သို့မြောက်တက်သွားကာအိပ်ယာနှင့်လွတ်နေလေသည်၊ထို့နောက် ကိုအေးကမပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းအောက်မှလက်လဋှိုသူမ၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်၊ကို အေးကသူ၏လီးကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်။ထိုးသွင်းလိုက်လုပ်နေလေသည်၊ စိုးမိုးခိုင် သည်မပု၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအသေအချာကြည့်လိုက်မိသောအခါမျက်စိများကိုမှိတ်ထားလျက်ကို အေးကလီးကြီးကိုထိုးသွင်းလိုက်တိုင်းတင်ပါးများကိုကော့ကော့ပေးသည်ကိုသတိထားလိုက်မိလေ သည်၊ထိုသို့တဖြည်းဖြည်းအထုတ်အသွင်းလုပ်နေရာမှကိုအေးကနှစ်ချက်သုံးချက်ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်လိုက်လေသည်၊ထိုအခါတွင်အိမ်လေးသည်သိမ့်ကနဲလှုပ်သွားလေသည်။
ထို့အပြင်မပု၏ တဟင့်ဟင့်ညည်းတွားသံနှင့်အတူဖတ်ဖတ်ဟူသောအသံကိုပါကြားလိုက်ရလေသည်၊ “မပု ။ ကိုအေးလိုးတာကောင်းရဲ့ လားဟင်” “အို သိပ်ကောင်းတာပေါ့တော် ။နာနာလေးလိုးစမ်းပါ ကိုအေးရယ် ။ ခံလို့ကိုမ၀နိုင်ဘူး” ထိုအခါကိုအေးသည်အသားကုန်လိုးလေတော့သည်၊ချောင်းကြည့်နေသောစိုးမိုးခိုင်မှာ လည်းရာဂစိတ်များတဖြည်းဖြည်းထကြွလာလေသည်၊စောက်ဖုတ်အတွင်းမှစောက်ရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက်နေသောကြောင့်စောက်ဖုတ်အပေါ်ရှိထဘီမှာစိုစိစိဖြစ်နေလေသည်၊သူမ၏လက်ကလည်း စောက်ဖုတ်ပေါ်သို့အုပ်ကိုင်လျက်ပွတ်သပ်နေမိလေသည်၊ထိုစဉ်တစ်ဖက်ခြံမှစိုးမိုးခိုင်၏အစ်မ၏ ရည်းစားဖြစ်သောဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်၏အစ်မရှိသည်ဟုထင်ှုသူမတို့၏ခြံတွင်းသို့မလွယ် ပေါက်မှတဆင့်ဝင်လာလေသည်၊ထိုအခါနောက်ဖေးတန်းလျားအနီးတွင်စိုးမိုးခိုင်ဘာကိုသဲသဲမဲမဲ ကြည့်နေသလဲဟုသိလိုစိတ်ဖြင့်အနားသို့တိုးကပ်လာရင်း။
စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့လက်ချောင်းများဖြင့်အလျားလိုက်ပွတ်သပ် ပေးရင်းလက်မနှင့်လက်ခလယ်ဖြင့်စောက်စေ့မာမာလေးကိုဍှပ်ဆွဲလိုက်သည်၊ဇော်ထွန်းသည် လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုသူမ၏စောက်ဖုတ်ထဲသို့အသာထိုးသွင်းလိုက်ရာလက်နှစ်ဆစ်ခန့်တိုးဝင် သွားပြီးစောက်ရည်ကြည်လေးများဖြင့်စိုရွှဲနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်၊ အထာကျွမ်းသောဇော် ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်ခံချင်နေပြီကိုသိလိုက်သောကြောင့်သူမ၏ ထဘီကိုခါးလည်အထိဆွဲလှန်လိုက်ပြီးဖြူ ဖွေးသွယ်လျသောပေါင်တန်လေးနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကားလိုက်ရာဖောင်းဖောင်းအိအိစောက်ဖုတ်လေး ၏ အလယ်ရှိအကွဲကြောင်းလေးမှာပြဲအာသွားပြီးအတွင်းသားနီနီရဲရဲလေးများကိုပါတွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်၊စော က်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး၏ထိပ်ရှိစောက်စေ့နီနီလေးမှာတော့ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ ထောင်ထနေလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်၏ပေါင်ကြားထဲသို့ဒူးထောက်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး။
သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုသူ၏ပေါင်ပေါ်သို့ခွတင်လိုက်သည်၊ထို့နောက်သူ၏လီးဒစ်ကြီးဖြင့်ပြဲအာနေသော စိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လေဋာက်အထက်အောက်ပွတ်ပေးလိုက်ရာစိုးမိုးခိုင် သည်သူမ၏ဖင်လေးကိုမောက်ကြွရင်းလူးလိမ့်နေလေသည်၊ ထိုကဲ့သို့စိုးမိုးခိုင်ထကြွလာသောအခါ မှဇော်ထွန်းကသူ၏ လီးကြီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ကာပြဲအာနေသောစောက်ဖုတ်အဝလေးတွင်တှေု့ အသာဖိသွင်းလိုက်သည်၊စိုးမိုးခိုင်ကလည်းသူမ၏သွယ်လျသောပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကိုတတ်နိုင် သမဋဖြဲကားလျက်ခါးကိုကော့ပေးနေမိလေသည်၊ထိုအခါတွင်ဇော်ထွန်း၏ကြီးမားတုတ်ခိုင်သောလီး ကြီးသည်သူမ၏စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်သွားလေသည်၊အပျိုစင်လေးဖြစ်သောစိုးမိုးခိုင်သည်ကြီးမားသောလီးကြီး၏ ဒစ်ကိုမခံနိုင်သောကြောင့်ပါးစပ်မှညည်းတွားလိုက်မိလေ သည်၊ “အား နာတယ်ကိုဇော် ။ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကိုဇော်ရယ် ။
စို့လိုက်လုပ်ပေးနေလေသည်၊ထို့အပြင်နို့သီး ခေါင်းလေးများကိုလဋာဖြင့်လျက်လိုက်။သွားဖြင့်ကိုက်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ရာစိုးမိုးခိုင်သည်အောက် ပိုင်းကနာကျင်မှုများကိုမေ့လျော့လာပြီး ကာမစိတ်များပိုမိုထကြွလာလေတော့သည် “ကိုဇော်” “ဘာလဲစိုး” “နဲနဲသွင်းကြည့်ပါလားဟင်” “အင်းလေ ။ ဒါဆိုစိုးနာရင်နဲနဲအောင့်ခံနော်” စိုးမိုးခိုင်ကသွယ်လျသောပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကိုဗိုက်သားဝင်းဝင်းလေးသို့ကပ်သွားသည်အထိ ဖြဲကားပေးလိုက်သောအခါဇော်ထွန်းကသူ၏လီးကြီးကိုခပ်ဆတ်ဆတ်ဖိသွင်းလိုက်သည်၊ ထိုအခါ တွင်ဇော်ထွန်း၏လီးကြီးသည်စိုးမိုးခိုင်၏စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့တစ်ဝက်ခန့်မြုပ်ဝင် သွားလေသည်၊ “အင့် အင့် အီး အ” စိုးမိုးခိုင်သည်ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရသော်လည်းအံကိုကြိတ်လျက်တောင့်ခံ နေလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်ကအံကိုကြိတ်လျက်လက်သီးကလေးဆုပ်ကာကြိတ်မှိတ်ခံ နေသည်ကိုကြည့်ရင်း။
လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သူမ၏ခါးလေးကိုဖက်ကာခပ်နာနာလေးဖှိုဆောင့်သွင်း လိုက်လေသည်၊ထိုအခါဖောက်ဟူသောခပ်တိုးတိုးအသံတစ်ချက်နှင့်အတူစိုးမိုးခိုင်၏ညည်းညူသံ ကိုကြားလိုက်ရလေသည်၊ထိုအသံသည်သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲမှအပျိုေ မေးပေါက်သွားသောကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသောအသံဖြစ်သည်ကိုဇော်ထွန်းသိလိုက်လေသည်၊ စိုးမိုးခိုင်သည်လည်းမခံမရပ်နိုင် အောင်နာကျင်သွားသောကြောင့်ယောင်ှုအော်လိုက်မိလေသည်၊ထို့နောက်ဇော်ထွန်းကသူ၏လီး ကြီးကိုစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်ထဲသို့ အဆုံးထိဆောင့် ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်နာကျင် လွန်းသောဝေဒနာကြောင့် အံကိုကြိတ်ှုခံနေသော်လည်းဇော်ထွန်း၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုအတင်းတွန်း ကန်ထားမိလေသည်၊ “အား ကိုဇော် နာတယ် ….နာတယ်… မခံနိုင်တော့ဘူး …. တော်ပါတော့… အဟင့်အဟင့်” ဇော်ထွန်းသည်သူ၏လီးကြီးကိုစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့အဆုံးထိထိုးသွင်းလိုက်ပြီး။
နာသလိုလိုနှင့်ခံစားရလေသည်၊ဇော်ထွန်းကလည်းသူ၏လီးကြီးကိုတစ်ဝက်ခန့်ဆွဲထုတ်လိုက်။ အဆုံးထိအောင်ပြန်ှုဖိသွင်းလိုက်နှင့်လုပ်ပေးနေသောကြောင့်စိုးမိုးခိုင်သည်လီးကြီးဝင်လာတိုင်း အောင့်သွားသောကြောင့် ခါးကလေးကော့ သွားလိုက် ။လီးကြီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်းစောက်ပတ်ထဲ တွင်ဟာတာတာနှင့်ခံစားလိုက်ရသောကြောင့်ဇော်ထွန်း၏ကျောပြင်ကြီးကိုအားမလို။အားမရသိုင်း ဖက်လိုက်နှင့်ဖြစ်နေလေသည်၊အရည်ကြည်များလည်း ပိုမှိုစိမ့်ထွက်လာသောကြောင့်လီးကြီးဝင် ထွက် တိုင်းစောက်ခေါင်းသံများပါပေါ်ထွက်နေလေသည်၊ စိုးမိုးခိုင်သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အရသာ တွေ့လာသောကြောင့်ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကိုရင်ဘတ်နှင့်ကပ်နေအောင်အစွမ်းကုန်ဖြဲကားပေးရင်း ခါးကိုပါမောက်ှုကော့ထိုးပေးလေသည်၊ဇော်ထွန်းကလည်းအရှိန်ရလာသောကြောင့်သူ၏လီးကြီး ကိုစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ပတ်ကလေးထဲသို့အားကုန်ဆောင့်သွင်းနေလေသည်။
အား ကိုဇော် ဆောင့် ဆောင့် … တအားဆောင့်…. အအ အား အား ကောင်းလိုက်တာ ကိုဇော်ရာ အဟင့် အအအား” စိုးမိုးခိုင်သည်ပြီးခါနီးလာသောကြောင့်အားမလို။အားမရဖြစ်လာကာဇော်ထွန်း၏ခါးကိုလက် နှစ်ဖက်ဖြင့်တအားဆွဲဖက်ရင်းပေါင်နှစ်ချောင်းကို အတင်းဖြဲကားပေးနေလေသည်၊ ထို့အပြင် ဖင်ကို ကော့ေÕမာက်ှုစကောဝိုင်းသလိုလုပ်လိုက်။ဘယ်ညာရမ်းလိုက်နှင့်လုပ်နေသောကြောင့်ဇော်ထွန်း သည်လည်းလိုးရင်းလိုးရင်းကောင်းသည်ထက်ကောင်းလာသဖြင့်သူမ၏မို့ဖောင်းသောနို့အုံဖွေးဖွေး လေးနှစ်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ှုနှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ရင်းအားပါးတရဆောင့်လိုးနေလေ သည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်သူမ၏စောက်ဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့တိုးဝင်နေသောဇော်ထွန်း၏လီးကို တဆတ်ဆတ်ဍှစ်ပေးရင်းအရည်များတရဟောစိုရွှဲကျလာကာတစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်လျက်တစ်ချီ ပြီးသွားလေတော့သည်၊ဇော်ထွန်းသည်လည်းလိုးရင်းလိုးရင်း။
သူမ၏စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့သုတ် ရည်များကိုအားကုန်ပန်းထည့်ကာငြိမ်ကျသွားလေတော့သည်၊ ထို့နောက်ဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်၏ စောက်ဖုတ်လေးအတွင်းတွင်သူ၏လီးကြီးကိုထိုးသွင်းထားရင်းနှစ်ယောက်စလုံးအမောပြေသည် အထိနေလိုက်သည်၊အတန်ကြာသောအခါမှဇော်ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်လေးအတွင်းမှသူ၏ လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးကုတင်ပေါ်မှထသွားလေသည်၊ထို့နောက်ဖန်ခွက်နှစ်လုံးတွင်ခပ်ဍိုဍို ဆေးရည်ကို လက်နှစ်လုံးခန့်စီထည်ှု့စိုးမိုးခိုင်ကိုအသာပွေ့ထူလိုက်ရင်းပေးလိုက်သည်၊ “ဘာတွေလဲဟင်။စိုးမသောက်ချင်ဘူး” “ကိုဇော် လည်းသောက်မှာပါစိုးရယ်” ဇော်ထွန်းကမော့သောက်ပြလိုက်သည်ကိုကြည့်ရင်းစိုးမိုးခိုင်လည်းသူမ၏လက်တွင်းရှိဖန် ခွက်ထဲမှဆေးရည် ကိုမော့သောက်လိုက်သည်၊တစ်ကိုယ်လုံးပူရှိန်းသွားသလိုအားပြည့်လာသည်ဟု ခံစားလိုက်မိလေသည် ၊ထို့နောက်စိုးမိုးခိုင်ကကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေရာမှကုတင်အောက်မှ ထဘီကို ၀တ်ရန်ကောက်ယူလိုက်သည်။
ထိုအခါဇော်ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်၏အနားသို့ကပ်သွားပြီးထဘီကိုင်ထား သောသူမ၏လက်ကလေးတစ်ဖက်ကို အသာဆုပ်ကိုင်လျက်ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်သူမ၏ကိုယ်လုံး လေးကိုသိုင်းဖက်လိုက်ပြီးပါးကလေးကိုအသာအယာနမ်းလိုက်သည်၊“ထဘီ ၀တ်ပါရစေဦး ကိုဇော်ရယ်” “၀တ်တာပေါ့စိုးရယ် ။ ကိုဇော့်လီးကြီးမှာပေနေတာတွေကိုသုတ်ပေးပါဦး” “ဟင်း ။ ရှက်လိုက်တာ” စိုးမိုးခိုင်ကပြောရင်းပျော့ခွေနေသောဇော်ထွန်း၏လီးကိုသုတ်ပေးလိုက်သည်၊ “ကဲ သုတ်ပေးပြီးပြီ” “စိုးစောက်ဖုတ်မှာပေနေတာကိုလည်းကိုဇော်သုတ်ပေးမယ်နော်” ထို့နောက်ဇော်ထွန်းကသူမ၏ထဘီကိုယူကာ အတင်းသုတ်ပေးနေလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည် အကြံနှင့်အချိန်ဆွှဲုသုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်လေသည်၊ သူတို့နှစ်ယောက်သောက်ခဲ့သောဆေးရည် သည်တန်ဖိုးကြီးသော ကာမအားတိုးဆေးဖြစ်လေသည်၊အတန်ကြာသော အခါစိုးမိုးခိုင်သည်လူရော စိတ်ပါလန်းဆန်းလာဏ္ဍုံသာမက။
ခုနကလဲတစ်ခါလုပ်ထားပြီးပြီ” “ချစ်လို့ပါကွယ် ။ စိုးမနာဘဲနဲ့သက်သက်သာသာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ့မယ်” “ကဲ ဒါဖြင့်ရင်လည်းမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်နော်” ဇော်ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်ကိုကုတင်ခေါင်းရင်းဘက်သို့ကျောပေးထိုင်ခိုင်းပြီးသူကသူမနှင့်မျက်နှာ ချင်းဆိုင်ှုခြေဆင်းထိုင်လိုက်သည်၊ ထို့နောက်စိုးမိုးခိုင်ကိုသူ၏ပေါင်ပေါ်သို့တက်ထိုင်ခိုင်ှုးသူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုသူ၏ခါးနောက်တွင်ဖြဲကားထားလိုက်သည်၊ပေါင်များဖြဲထားသောကြောင့်ပြဲ အာနေသောသူမ၏စောက်ဖုတ်အ၀တွင်သူ၏လီးကြီးကိုတေ့လိုက်ပြီးသူ၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုသူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ခိုင်းလိုက်သည်၊ထို့နောက်နှစ်ယောက်စလုံးကိုယ်အထက်ပိုင်းများကိုနောက် သို့လှန်လိုက်သောအခါတင်ပါးများကိုရှေ့သို့တိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွှာုးတေ့ထားသောလီးတန်ကြီး သည်စောက်ဖုတ်ထဲသို့တိုးဝင်သွားလေသည်၊ထို့နောက်ရှေ့သို့ရင်ချင်းအပ်အောင်ထိကပ်လိုက် သောအခါ။
ဆင်းထားသောခြေထောက်များကိုဒူးထောက်အနေအထားသို့ပြောင်းယူလိုက်သည်၊ထို့ နောက်စိုးမိုးခိုင်၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုသူ၏ပုခုံးပေါ်သို့ထမ်းတင်လိုက်ပြီးမှောက်ချလိုက်သော အခါစိုးမိုးခိုင်၏တင်ပါးများသည်မြောက်တက်လာပြီးစောက်ဖုတ်သည်လည်းပိုမိုတင်းမာလာလေ သည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်လီးတန်ကြီးကအပေါ်စီးမှစောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ဝင်ချည်ထွက်ချည်ဖြစ်နေ သည်ကိုတွေ့နေရသောကြောင့်ပှိုစိတ်ကြွလာသလိုဇော်ထွန်းသည်လည်းလီးကိုထိုးသွင်းလိုက် သောအခါပြားကပ်သွား သောစောက်ဖုတ်နှင့်လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါဖောင်းကြွတက်လာ သောစောက်ဖုတ်ကိုကြည့်ရင်းပှိုမဏ္ဍိုးမဏ္ဍွဖြစ်လာလေသည်၊ထို့ကြောင့်ပါးစပ်မှပြောရင်းအားရပါးရ ဆောင့်လိုးလေတော့သည် “စိုး ။ ကိုဇော်အားရပါးရလိုးတော့မယ်နော်” “ဖတ် ဖတ် ဖတ်” “အင့် အဟင့် အအ ကိုဇော်ရယ် စိုးကိုမသနားတော့ဘူးလား” “စိုးနာလို့လားဟင်” “နာတော့သိပ်မနာဘူး ။